Limby Maharavo - KoloikoWiki
Limby Maharavo dia mpandrindra sarimihetsika malaza. Manana ny mari-pahaizana manokana eo amin'ny fakana sary sy sarimihetsika avy tany amin'ny ORTF tao Paris izy. Maro ireo sarimihetsika novokariny, ary imbetsaka izy no nandray anjara tamina fihaonana iraisam-pirenena momba ny sarimihetsika.
Maro koa ireo andraikitra nosahaniny teto amin'ny firenena. Efa filohan'ny komity mpitantana ny ORTM, talen'ny kabinetran'ny ministeran'ny fampahalalam-baovao sy ny kolotsaina ary ny serasera, filohan'ny komity mpitantana misahana ny sarimihetsika teto Madagasikara, ary talen'ny fandrindrana sary teny amin'ny Cinemedia.
Mpampianatra mpikaroka teny amin'ny ambaratonga ambony koa i Limby Maharavo ary efa mpanolo-tsaina teknika tao amin'ny ministeran'ny fanabeazana.
Mpakafy fanatanjahantena koa izy indrindra fa ny baolina kitra. Teo am-panaovana baolina kitra mihitsy aza no nahafaty azy tamin'ny 27 Novambra 2011. Nijanona tampoka ny fitepon'ny fony teo am-pilalaovana baolina tao amin'ny kianja Masina Misely, Amparibe, Antananarivo, ary tsy voavonjy intsony ny ainy na dia nialana nenina teny amin'ny hôpitaly aza.
Retrieved from "https://koloiko.com/wiki/index.php?title=Limby_Maharavo&oldid=62"
This page was last edited on 19 August 2018, at 13:00.